» बाहिरियो सिल्पा पोखरेल को नयाँ काण्ड ! बोले छवि ओझा, (भिडियो हेर्नुस) बाहिरियो सिल्पा पोखरेल को नयाँ काण्ड ! बोले छवि ओझा, (भिडियो हेर्नुस) – हाम्रो खबर
बाहिरियो सिल्पा पोखरेल को नयाँ काण्ड ! बोले छवि ओझा, (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौँ । चर्चित नायिका शिल्पा पोखरेल र छवी ओझा प्रकरण फेरी एक पटक चर्चामा आएको छ । केही समय अघि अर्की नायीका शिल्पा पोखरेलले उनका श्रीमान छवि ओझाका विषयमा दिएको अभिब्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको भएता पनि यो विषय अझै किनारा लागिनसकेका कारण यो विषय फेरी एक पटक चर्चामा आएको छ । छविको चौथो पत्निका रुपमा रहेकी शिल्पाले डि/र्भो/स मागेपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो ।”
“उनीहरुबीच ४ वटा मु द्दा चलिरहेका छन् । अधिवक्ता स्वागत नेपालले सो विषय हेरिरहेका छन् । सो मु द्दा को वकालत स्वागत नेपालले गरेका छन् । यो विषयमा मिलेमतोको प्रयास गरेको अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताएका छन् । एपि वान टेलिभिजनमा प्रसारित भिडियो सामग्रीमा सो कुराको ,खुलासा गरेका हुन् ।”
“शिल्पाका श्रीमान छ,विले आफु मिडियामा आउन नचाहेको बताएका छन् । मिडियामा आउन नचाहेका कारण संचारकर्मीको फोन आफुले नउठाएको उनले बताएका छन् ।”
“उनले आफुलाई न्यायलय प्रति, विश्वास लागेको बताएका छन् । उनले मिलापत्र भइरहेको भन्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिएका छन् । भिडियोमा, शिल्पा भारतीय एक निर्देशसँग पनि नजिक रहेको कुरा उक्त रिर्पोटमा देखिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो”